New CDC mask nhungamiro: Zvaunoda kuziva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » New CDC mask nhungamiro: Zvaunoda kuziva
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
N95 neKN95 masks akanaka kwazvo pakusefa zvimedu asi achiri nyore kupfeka. Iwo akagadzirirwa zvigadziriso zvehunyanzvi senge hutano kana mabasa ekuvaka. Masks anoumba chisimbiso chinoshanda nechiso chemunhu uye anonzi anosefa angangoita 95% yezvimedu zvidiki.
IU.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inonzi yakagadzirira kuburitsa dhizaini yegwaro rayo pakushandisa zvakanaka masks mukati medenda repasi rose reCOVID-19.
MaAmerican achakurudzirwa kupfeka zvirinani-sefa (uye zvinodhura) N95 neKN95 masiki kuitira kumisa kupararira kwegoronavirus.
Kana vanhu vachikwanisa "kushivirira kupfeka KN95 kana N95 mask zuva rese," vanofanirwa kuzviita, CDC inodaro.
Chii chinonzi N95 uye KN95 masks?
Musiyano chete uripo pakati peN95 neKN95 masks unobva kune akasiyana siyana akatarwa neUS neChina zviremera. China inoda kuyedzwa kumeso kweKN95 masks, kusiyana neUS, uko masangano akaita sezvipatara ane mitemo yawo munzvimbo iyi. Muyero weAmerica unodawo maN95 masiki kuti aite "kufema" zvishoma pane KN95 masks.
2. Chii ichocho CDC kurudziro pamasiki izvozvi?
Iyo yazvino vhezheni yeCDC nhungamiro, yekupedzisira yakagadziridzwa muna Gumiguru, inokurudzira kushandisa akagadzika machira emasiki ane maviri akaturikidzana ejira revanhu vazhinji munzvimbo zhinji. Zvinoda kuti ruzhinji rusapfeke maN95 ekufema akanyorwa kuti "kuvhiya" - zvichireva kuti akagadzirirwa kuchengetedza anoapfeka uye nevanhu vakavapoteredza.
Chikonzero ndechekuti zvipatara zveUS hazvibvumidzwe kushandisa KN95 dziviriro zvachose, uye CDC inoda kuti vashandi vehutano vawane pekutanga kuwana masheya mashoma. Vatsoropodzi vanoti kurudziro, inotangira panguva apo michina yekudzivirira munhu (PPE) yaive ishoma pasi rose, haichashandi.
3. Iko shanduko yeOmicron?
Muchidimbu, hongu, asi haisi iyo nyaya yese. Musiyano weOmicron waratidza kuve unotapuriranwa zvakanyanya uye unokwanisa kurova kudzivirira-kunokonzeresa kusadzivirirwa kupfuura hutachiona hweSARS-CoV-2 hwakapfuura. Asi kune dzimwe nyika Europe seGermany yakaraira FFP2 masks - inova iyo EU chiyero chinopa N95-level dziviriro - kutanga kwaNdira 2021. Izvi zvakaitika mushure mekunge matambudziko ekuwanikwa kwePPE pasi rose agadziriswa uye nguva refu Omicron asati abuda.
4. Zvinotaridza kunge vanhu vekuAmerica vakatarisana nemitengo yekuwedzera
Zvakanaka, mitengo muUS yakawedzera zvichitevera mishumo yenhau nezvekuuya CDC kutungamira update. Semuenzaniso, paki yemasiki makumi mana eKN40 emhando yeHotodeal yakasvetuka kusvika pamadhora makumi manomwe nepfumbamwe Amazon, kubva ku $ 16.99 pakupera kwaNovember, maererano ne data yazvino.